Ambongadiny ambongadiny totozy mpamokatra sy mpamatsy | Sheerfond
Ao amin'ny biraonao milamina, paosy totozy tsara tarehy, miaraka amin'izay dia mpihazona penina sy mpihazona telefaona finday, misy fahatsapana majika ve? Eny, ny ampahany fitahirizany sy ny ampahany amin'ny totozy dia azo sarahina araka izay itiavany azy, ary azo ampiasaina ihany koa Alamino ny taratasinao sy ny faktioranao. Hadino ny milaza aminao ny tena zava-dehibe kokoa, izany dia charger tsy misy tariby amin'ny telefaona finday, raha mbola apetrakao amin'ny telefaona ilay finday dia mety ho voaloa amin'ny fotoana rehetra ianao, avelao aho hampiditra an-tsipiriany an'ity zavatra vaovao ity:
1. Pady totozy vita amin'ny hoditra izy io, ity vokatra ity dia mampiasa fitaovana milamina amin'ny tontolo iainana, ary akora PU tsy misy fitafiana, mahatsapa tsara, ary afaka mihetsika malalaka eo amboniny ny totozy.
2. Izy io dia famandrihana tsy misy tariby, famahanana haingana, 15W / 10W / 7.5W / 5W, azo ampiasaina daholo, rehefa miasa ianao, apetraho eo amin'ny birao ny telefaona, hanomboka hameno ny telefaona findainao izy, ary afaka mameno koa ianao WTS tsy misy tariby Bluetooth headset mamaly.
3. Izy io dia fitehirizana birao, penina, kapila flash USB, paingotra karatra, ary famafana rehetra dia azo apetraka hanadio ny biraonao.
4. Izy io dia fanasokajiana rakitra, azonao atao ny manasokajy naoty, na faktiora ary taratasy.
5. Ny ampahany fitehirizana sy ny ampahany amin'ny totozy dia azo esorina amin'ny sitrapony, ireo faritra roa ireo dia atambatra andriamby.
6. mpitazona finday izy io, rehefa mijery ilay horonantsary ianao dia afaka mamoaka ny tananao,
Izy io koa dia vokatra misy patanty izay miaro ny vokatry ny asantsika.
Ity vokatra tsara tarehy ity dia noforonin'ny mpamolavola antsika tamim-pitandremana, ary io koa dia zarain'ny tànan'ny mpiasan'ny orinasa anay. Asa tanana io, vokatra tsara toy izany, tsy tianao ve ny maka santionany hiaina izany, raha manaitra anao izany, aza hadino izany Manoro hevitra amin'ny namanao.
Sehatra fampiasana Hetsika fampiroboroboana, fanofanana ary fananganana ekipa, Fanomezana fandraisana, miverina any an-tsekoly / fizarana diplaoma, fanomezana fanomezana ara-barotra vaovao, fanomezana amin'ny tradeshow, fanomezana "misaotra", hetsika hafa
Fanontana logo: CuCustom
Teo aloha: Poketra A4
Manaraka: Raozy volamena